July 2012 - ♥ ♥ MY GREEN LIFE ♥ ♥
Phyu Lwin July 29, 2012 17 Comments
ဘာမှ မရေးဖြစ်လို့ Facebook မှာတင်ထားတဲ့ပုံကို ဒီမှာ ထပ်တင်ပါတယ် :D
ခံစားချက်နဲ့ ထပ်တူကျသူများ စိတ်တိုင်းကျ လွမ်းနိုင်ပါသည် :)))
Phyu Lwin July 22, 2012 15 Comments
လက်တွဲပြုတ်သွားကြတာ အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး .....
အမုန်းတွေတော့ ထင်ကျန်ရစ်နေခဲ့တယ် …..
ဥပေက္ခာတွေအဖြစ် အသွင်ပြောင်း မေ့ပစ်လိုက်ဖို့တော့
အားပေးမှုတိုင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ....။ ရေးသမျှကို ခံစားနားလည်အားပေးတတ်သူများ ... C-box မှာ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာနှုတ်ဆက်တတ်သူများ၊ ရေရေရာရာရေးတတ်တာလည်းမဟုတ်ပဲ ကြုံသလိုရေးတာတွေကို ကြုံသလိုအားပေးသွားကြသော ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ စာဖတ်သူများ၊ အရာအားလုံးအတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
အနည်းဆုံးတော့ ဒီနေရာက ကျမပျင်းလာရင် ချရေးချင်ရာရေးတတ်တဲ့... နေရာတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီ ....။ တစ်ခါတစ်လေတော့ ခံစားချက်တစ်ချို့ရေးတယ်... အများအားဖြင့် အငှားခံစားပြီး ဖန်တီးရေးတတ်တာများပါတယ် ....။ ဘာကြောင့် ကိုယ့်ခံစားချက်အစစ်တွေမဟုတ်ပဲ အဲလိုရေးတာလည်းမေးရင်... စာရေးရတာ တစ်ကယ်အပျင်းပြေလို့ပါ ...။ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ မထိခိုက်စေပဲ ...စာတွေဆက်ရေးဖြစ်ဦးမှာပါ ........။
Phyu Lwin July 19, 20129Comments
တခါတခါတော့လည်း .... မသည်းပဲ မိုးဖွဲလေးတွေမျှသာပါပဲ .........
အတွေးတချို့က လက်ရှိကာလကိုပဲ ....
တချို့ကတော့ ....... ကျန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဆီကို အပြေးအလွှား ......
တချို့ကတော့ မြေပြင်ပေါ်မှာ ကစဉ့်ကလျားကျလို့ ........
တစ်ချို့ကတော့ မိုးရေစက်တွေနဲ့အတူ လေထဲမှာလွင့်မျော .....
မြေပြင်နဲ့တောင် ထိတွေ့ခွင့်မရဘဲ .....
ရေငွေ့အဖြစ်နဲ့ပဲ ....လေခေါ်ဆောင်ရာနောက် လိုက်ပါလို့ ......
အဲလိုပဲ .... မပြောဖြစ်တဲ့စကားလုံးတစ်ချို့လည်း ....
မိုးကလည်း သူ့တာဝန်သူကျေပွန်စွာ ...
သူ့ကိုမုန်းသူရှိမယ် ...ချစ်သူရှိမယ် ....
မုန်းသူတွေ ပိုမုန်းမှာစိုးရိမ်လိုိ့ဆိုပြီး .... မရွာချပဲနေတာမှမဟုတ်တာ ....
အကောင်းချည်းလက်ခံချင်လို့လည်း မဖြစ်ဘူးလေ .......
အဲဒီတော့ ကိုယ့်တာဝန်ကိုကျေ.... ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ် ....
အခုတလော ဒီမှာ မိုးအမြဲလိုလိုရွာတယ်.....။ မိုးတဖွဲဖွဲရွာလာရင် အိမ်ကိုပိုသတိရတယ် ...။ ဘာကြောင့်တော့မသိဘူး...။ ဒါပေမယ့် အိမ်ကိုတော့ အချိန်ပြည့်အချိန်တိုင်းသတိရနေတာပဲ...။ မိုးတွေရွာလာရင် ပိုဆိုးတယ်...။ အိမ်မှာဆိုရင် မိုးရွာလာပြီဆို အပြင်သိပ်မထွက်ဖြစ်ပဲ... မိသားစုတွေဆုံပြီး မုန့်တွေစား..စကားတွေပြောနဲ့ .. အခုအချိန်မှာတော့ တစ်ယောက်တည်း..... အဲဒီတော့ ပိုလွမ်းတယ်....။ ဘ၀လှဖို့ ခဏတာခွဲရတာပဲ...စာဖွဲ့လောက်စရာတော့ မဟုတ်ပေမယ့်.... ကိုယ့်အတွက်တော့ ရေးချင်ရာချရေးတဲ့ စာအပိုင်းအစတွေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ် .....။
ကာရံနဲ့ သံစဉ် - သီချင်းနဲ့ ကဗျာ ♥ ♫ ♥
Phyu Lwin July 10, 2012 12 Comments
ရေးချင်တဲ့အချိန် ကဗျာတွေ ချရေးဖို့ စာရွက်လွတ်တစ်ချို့ရယ်
မင်းအတွက် သံစဉ်တွေကို ဖော်ကျူးပေးမယ့် ဂစ်တာတစ်လက်ရယ်
လက်ခုပ်တီးပေးသလို ….တသွင်သွင်စီးဆင်းနေမယ့် စမ်းချောင်းသေးသေးလေးတစ်ခုရယ်
မင်းရဲ့ ဂစ်တာသံတစ်ချို့ကို …ဟာမိုနီလိုက်ပေးမယ့်
တီတီတာတာ ကျေးငှက်ကလေးတွေရယ် ……… ♥ ♫ ♥
ပန်းပွင့်လှလှလေးတွေ…. ပျားပိတုန်းတွေ လိပ်ပြာတွေ ရစ်ဝဲနေမယ့်
လှပတဲ့ ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခု မရှိရင် နေပါစေ …….
အစိမ်းရောင် သစ်ပင်တွေရှိရင်ပဲ ….ကိုယ်ကျေနပ်ပါပြီ …..။
အသည်းပုံဖော်ထားတဲ့ အနံ့မွှေးလွန်းတဲ့ အမျိုးအစားစုံ ကော်ဖီတွေ ကိုယ်မလိုပါဘူး……
ကိုယ့်အတွက်က ကဗျာဆန်နေတတ်ခဲ့ပြီ….. ♥ ♫ ♥
ကိုယ်ကဗျာတွေရေးဖို့ ကာရံတွေမရှိတဲ့အခါ …… မင်းက ဂစ်တာသံတိုးလျလျလေး တီးခတ်ပြမယ်
ကြယ်ကလေးတွေ …ရေတွက်ရင်း….. သီချင်းတစ်ချို့ဆိုညည်းပြမယ် …..။
မင်းသီချင်းတွေရေးစပ်ဖို့ သံစဉ်တွေ မရှိချိန်ဆိုရင် ……
ကိုယ်က မင်းအတွက်ရေးထားတဲ့ ကဗျာတွေ ရွတ်ပြမယ် ….
လမင်းကြီးးကို ငေးကြည့်ရင်း….. မပြီးဆုံးသေးတဲ့ဘ၀ခရီးတစ်ခုကို အတူဆက်လျှောက်ဖို့ ….
ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ချို့ကို …..တိုးတိုးလေးပြောပြမယ် ……။
မင်းက သီချင်းတွေဆိုမယ်… ကိုယ်က ကဗျာတွေရေးမယ် ……
လောဘတွေ ဒေါသတွေ ….. သံသယတွေ.. အာဃာတတွေ မရှိဘူး …..
အချစ်လို့ ခေါင်းစဉ်မတပ်ချင်တဲ့…. အေးချမ်းတဲ့ မေတ္တာတရားတွေ စီးဆင်းနေမယ် ……
ကိုယ်တို့တွေ နားလည်မှုတွေနဲ့ပဲ ..ရှေ့ဆက်ကြမယ် ……..♥ ♫ ♥
Photo credit: gallery.mobile9.com
ရောင်စုံနှင်းဆီကမ္ဘာ .... ^^
Phyu Lwin July 06, 2012 15 Comments
ဒီနေ့ နည်းနည်း အချိန်ရလို့ ဟိုလည်ဒီလည်လုပ်ပြီးတော့... တစ်ခုခုရေးဖို့ စဉ်းစားမိတယ်...။
ဒါပေမယ့် ....ဘာမှရေးဖို့..... စိတ်ကူးထဲ မရှိပြန်ဘူး...။ ဒီနေ့ စာမေးပွဲက presentation တွေအားလုံးပြီးသွားပြီ ..ပြီးတော့ သောကြာနေ့လည်းဖြစ်တော့... စာမကြည့်ပဲ အငြိမ့်ဖွင့်ထားရင်း အခန်းရှင်း... စာအုပ်တွေ ဟိုစီဒီစီလုပ်နေတာ အခု ည ၁၁ နာရီထိုးမှပဲ ပြီးတော့တယ်...။ ၁၉ ရက်နေ့မှ ပြန်ပြီးတော့ oral exam/ written exam တွေဆက်ဖြေရပြီး ၈ လပိုင်း ၁၇ ရက်နေ့ဆိုရင် အားလုံးပြီးသွားပြီး အေးအေးဆေးဆေးစာရေးနိုင်တော့မှာ..။ ဒီကြားထဲ... ပျင်းရင်ပျင်းသလို ဟိုရေးဒီရေးပေါ့ ...။ ဒီမှာ စာမေးပွဲကာလက အရမ်းကြာတယ်... တစ်ဘာသာနဲ့ တစ်ဘာသာကြားထဲမှာ အနည်းဆုံး ၄ ရက်လောက်ခြားတယ်...။ စာကြည့်ချိန်တော့ရပေမယ့် stress တွေနဲ့ အကြာကြီးနေရတာကျတော့လည်း မကောင်းပြန်ဘူး ။။။
နှင်းဆီတွေ တစ်ဝကြီးကြည့်ကြပါဦးနော်.. အပျင်းပြေပေါ့..။ နှင်းဆီချစ်တတ်သူများအတွက်ပါ ....။ ဂျပန်က နှင်းဆီပန်းတွေပါပဲ..။ နောက်ထပ်လည်း အများကြီးရှိသေးတယ်..။ နောက်ပျင်းတဲ့အချိန်.. ရေးစရာမရှိတဲ့အချိန်မှ ထပ်တင်ရဦးမယ် ^_*
အပိုင်း -၂ :D
Creativity starts fromaBELIEF ++
ကလေးတုန်းက..... ဘာကိုမှ အကြောက်အလန့်မရှိ..
ကိုယ်သာ ဘုရင်.. ကိုယ်သာ သူများထက်သာတယ် လုပ်နိုင်တယ်လို့ ..ယုံကြည်ခဲ့ကြတော့
ကလေးသဘာဝပေမယ့်... မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုကြောင့် ဘာဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်..။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို မြင်တတ်လာပြီး ယှဉ်ကြည့်တတ်လာကြတယ်..
ငါလုပ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေ ဖြစ်လာကြတယ်..။
အဲဒီပူပန်မှုတွေက ..... ရဲဝံ့မှု မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေကို အနည်းနဲ့အများ လျော့နည်းစေလာခဲ့တယ်...။
အဲဒီတော့ တခါတလေ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်... မလုပ်နိုင်တော့ဘူး....။
တကယ်တော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအားဆိုတာ.. မိမိကိုယ်ကို၊ မိမိအစွမ်းအစကို ယုံကြည်မှုပေါ်မှာ အခြေခံဖြစ်တည်လာတာပါ..။ (ဒီ movie လေးကို သဘောကျလို့ .. ကိုယ်တွေးမိသလို ပြန်ရေးကြည့်မိတာ၊ ပြီးဆုံးအောင် ကြည့်လိုက်ရင် တကယ်ကောင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်တစ်ခုကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး သရုပ်ဖော်ထားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်..။ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပေမယ့်.. သရုပ်ဖော်ထားတာလေးက တကယ်ဖြစ်နေတတ်တာတွေကို ထင်ဟပ်မိစေတယ်..
(Facebook မှာတော့ share ထားတယ်..ဒါပေမယ့် အဲဒီကိုက တော်တော်များများက ရောက်ဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ ဒီမှာ ထပ်ရှယ်လိုက်တာပါ.. အိုင်ဒီယာလေး ကြိုက်လို့ပါ)
Thanksalot for your kind visit ! :-**
# Flowers # My Own Feelings
Labels: Flowers, My Own Feelings, Sharing
ရေးချင်ရာ ရေးဖြစ်ခဲ့တာတွေ .........
Phyu Lwin July 01, 2012 12 Comments
တဂွမ်ဂွမ် မြည်တတ်တဲ့ နာရီက နှိုးစက်သံတွေ ……
ငါးမိနစ်ခြားတစ်ခါ…. ထထအော်ပေးတဲ့ ဖုန်းက နှိုးစက်မြည်သံတွေ
ဒီလိုအသံတွေနဲ့တော့ မနိုးတတ်ပဲ ပြန်ပြန်အိပ်တတ်ခဲ့တာ………
Vibration နဲ့လာတဲ့ နင့်ရဲ့ message သံလေးတစ်ခါမှာတောင်
နင့်ကို မှီခိုချင်လို့….. မဟုတ်ပါဘူး……….
စာပြန်မပို့မချင်း……….. ငါမနိုးမှာ စိုးရိမ်နေတာမျိုး မဖြစ်စေချင်လို့ပါ……။
အဲဒီစာတိုလေးတွေနဲ့ ……. Missed call တွေနဲ့ပဲ အိပ်ရာနိုးတတ်ခဲ့တာ
ငါ နင့်အပေါ် အားကိုးနေတာမဟုတ်ပါဘူး………..
နင့်ဂရုစိုက်မှုတွေကို မြတ်နိုးတတ်ခဲ့တာပါ ……….။
ခဏခဏ ဖုန်းခေါ်တတ်ခဲ့တာ စာပို့တတ်ခဲ့တာက
သတိရလို့ နင့်အသံကို ကြားချင်လို့ပါ .................။
နင်ရေးတတ်တဲ့ ဆိုပြတတ်တဲ့ သီချင်းတွေတိုင်းကို
ဘာမှ မဝေဖန်တာက .... ငါဘာမှ မသိလို့ မဟုတ်ပါဘူး.....
နင်ဆိုသမျှ..ရေးသမျှကို ....... ငါအကောင်းချည်းမြင်နေတတ်လို့ပါ ......။
ငါရေးသမျှ စာတွေ ကဗျာတွေကို နင့်ကို မပြောပြဖြစ်တာက
လျှို့ဝှက်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး ....
နင့်အကြောင်းချည်း များများဆိုတော့ .... နင်လှောင်ရယ်မှာ ကြောက်မိလို့ပါ ......။
ရေးချင်ရာ ရေးတယ်ဆိုပြီး..... Galaxy S3 ပုံတင်ထားတာက
အကြောင်းအရာနဲ့တော့.... ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး.....
အခုတလော ကျမ ရူးနေတဲ့ ဖုန်းဖြစ်နေလို့ပါ .........။
ခဏခဏပို့စ်တွေတော့ တင်ဖြစ်ပြီး အိမ်လည်ဖို့ ပျက်ကွက်နေတာက
တကယ်အလုပ်ရှုပ်နေလို့ပါ ....... :D
အားလုံးပျော်ရွှင်စေဖို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ....ရေးထားတာက တော်တော်များများရေးတတ်တဲ့ ကဗျာပုံစံနဲ့တော့ တိုက်ဆိုင်နေတယ်...။ အကြောင်းအရာတွေတော့ မတိုက်ဆိုင်လောက်ဘူးထင်ပါတယ် .....။